CAALAMKA NINKII UGU HOREEYAY EE LOOXUKUMO QARAXII U.S.A
Qaraxyadii magaalooyinka Washington,new york iyo xarunta gaashaandhigga ee pentangon ee dalka maraykanka 11.sep:2001 ayaa ninkii ugu horeeyay caalamka oo dhan xabsi dheer loogu xukumay dalka jarmalka.
Mounir al motasadaq oo 29 jir ah una dhashay dalkaasi maroko ayay maxkamad kutaalla magaalada Hamburg ee dalka Germany ku xukuntay 15 sanadood oo xabsi ah.
Xaakimka xukunka riday ayaa waxaa uu u cuskaday in uu wax ka maleegay xeeshii lagu dilay dad kor udhaafay 3000 qof,isla markaasina uu toos uga mid yahay urur argagixiso.
"eedaysanuhu wuxuu ka tirsanaa taniyo maalintii la,aas-aasay kooxdii Maxamed Atta,wiilkan ka mid ahaa ardayda muslimiinta dalkan wax ka barata,waxaa ku caddaatay in uu ku sifoobay nacayb wayn oo ku aadan maraykanka iyo israaiiliyiinta kaasoo uu kutaamay qaraxyo uu u gaysto,waxaa uu wax ka diyaariyay halaagii halkaas ka dhacay isagoo xaalka talaabo-talaabo ula socday"sidaas waxaa yiri xaakimka layiraahdo Allbrecht mentz markii uu xukunka ku ridaayay.
waxaa la soowariyay in Mounir uu ahaa nin aad u cibaadaysta oo diinta islaamka aad ugu dhagan.
qareenka u doodaayay wiilkaas ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadandoono xukunkaasi oo uu ku tilmamay mid dhacay iyadoo aan wax daliila loohaynin in uu galay falkan iyo inkale.
wasiirka arimaha gudaha dalka Germany Mr Otto schilly oo xukunkan aad uga war dhowraayay ayaa wax yar uun kadib markii lagu dhowaqay si deg deg ah jawaab uga bixiyay."waa go,aan cad"maxkamadu waxaa ay qaadatay arin meeshay wax marisay ku haboonaa,waxaa kaloo uu digniin kulul unoqonayaa cid kasta oo isku dayda in ay fuliso fal kaasoo kala ah"ayuu yiri wasiirku,balse waxaa ay wariyayaashu cabireen in mr Otto schilly aanay ka marnayn cabsi ku beegan in xukunkaasi dhalin karo nabadgalyo xumo ama aargoosi ku yimaada dalka jarmalka, inkastoo baa layiri uu kalsooni muujiyay sheegaysa in wakhtigan aysan taagnayn wax la taabankaro.